လူမီနီယမ် Casting Die ဝေငှသို့ကာစ်လူမီနီယမ်, လူမီနီယမ်အလွိုင်းတရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:လူမီနီယမ် Die ကာစ်,သို့ကာစ်လူမီနီယမ်,လူမီနီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die,မြင့်မားသော Precision လူမီနီယမ်ကာစ် Die,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူမီနီယမ် Die ကာစ်
လူမီနီယမ် Die ကာစ်
လူမီနီယမ် Die ကာစ် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, လူမီနီယမ် Die ကာစ်, သို့ကာစ်လူမီနီယမ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, လူမီနီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံ လူမီနီယမ် Die ကာစ် ပေးသွင်း
လူမီနီယမ်ကုန်ကြမ်းကယ်တင်စက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတွေအများကြီးကိုကယျတငျနိုငျသည်, မြန်နှုန်းမြင့်မြင့်မားတဲ့ဖိအားမှိုအဆာ, solidification နှင့်သတ္တုများပုံသွန်းမြင့်မားသောဖိအားမှာဖြစ်လာဖြစ်ပါသည်, ထိုဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ထုတ်ကုန်သည်းခံစိတ်အဆင့်မြင့်မားသည်သွန်းသောလူမီနီယံ ချ. သေဆုံး ယခု foundry စက်မှုလုပ်ငန်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မြင့်မားတဲ့ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတိကျစွာမြင့်မားခိုင်မာခြင်း, လေကြောင်းအတွက်တိကျစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအာကာသ, မော်တော်ကား, စက်ပစ္စည်းကုန်ထုတ်လုပ်မှု, သင်္ဘောများနှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း။